Amiirka Ugu Awooda Badan Dalalka Muslimka Ma Aha Dhaxalsugaha Sacuudiga Ee Waa Amiirka Dhaxaltooyada Imaaraadka – somalilandtoday.com
Amiirka Ugu Awooda Badan Dalalka Muslimka Ma Aha Dhaxalsugaha Sacuudiga Ee Waa Amiirka Dhaxaltooyada Imaaraadka
(SLT-Riyadh)-Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed Bin Salman”MBS”ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa uu u muuqday inuu yahay Amiirka ugu awooda badan dunida Muslimka hase yeeshee waxaa jira amiir kale oo la rumeysan yahay inuu yahay Amiirka ugu awooda badan dunida Muslimka waana amiirka leh dhaxaltooyada Imaaraadka Carabta Amiir Maxamed Bin Zayid “MBZ”.
Wargeyka caanka ah ee New York Times daabacay dhawaan maqaal dheer oo uu ugaga hadlayo awooda dhaxalsugaha Imaaraatka Carabka, Maxamed Bin Sayid.
Wargeyska ayaa qoray in sannadkii 1991-dii isagoo 29jir ah in Maxamed Bin Sayid uu bilaabay in uu Maraykanka hub iyo diyaarado dagaal ka iibsado kadib dagaalkii Gacanka.
30 sanno kadib xilligaas, wargeyska ayaa sheegay in dhaxalsugaha oo ah maamulaha magaalada Dubai iyo amiirka sida dadban u maamula Imaaraatka uu yahay ninka ugu awoodda badan dunida Carabta yahayna kan ugu saameynta badan.
Maxamed Bin Zayid ayaa ka shaqeeyay xidhiidh dhow oo uu la yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump xitaa ka hor intii uusan madaxweyne noqonin.
Waxaa la sheegay in uu isku dayay in uu dhexdhexaadiyo Maraykanka iyo Ruushka.
Muddo laba sanno ah ma uusan soo booqanin Maraykanka, inkasta oo markii hore uu si joogto ah u tagi jiray. Isaga oo 18 jir ah ayuu ka qalin jabiyay jaamacad ku taalla Ingiriiska, wuxuuna bartay duulliyenimo.
Waxaa la sheegay in uu yahay nin aad u firfircoon, shirarka aanan kasoo dib dhicin, go’aanadana si dhaqso leh ku gaara. Saraakiisha Maraykanka waxa ay ku tilmaameen nin laab furan, aan isla weyneyn, qaxwihiisana isaga shubta.